» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २५
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २५
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:४९
मकवानपुर, २ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को काठमाडौँ अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । उनीहरुमध्ये १० जनाका बोरमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिन तयार पारिएको यस भिडियो सिरिजको यो २५ औँ भाग हो । यस भागमा काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भागमा सुरेश लामा, मदन मगर, सन्दीप सुनुवार, सरला बिसी र कमल रसाईलीका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
११) सुरेश लामा –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका एघारौँ प्रतियोगी हुन् सुरेश लामा । काठमाडौँको तारेभिर निवासी सुरेश चर्चित गायक बन्न चाहान्छन् । अहिलेसम्म संगीत नसिकेता पनि संगीत क्षेत्रमै नै लाग्ने उनी बताउँछन् । उनी पहिलो पटक रियालिटी शोमा सहभागी भएको बताउँछन् । उनले अडिसनमा ‘तिनै हुन् मेरी आमा’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतबाट निर्णायकहरुको मन जितेका सुरेशले त्यसपछि ‘छोडी गए पाप लाग्ला’ बोलको गीत गाएका थिए । दोस्रो गीतबाट निर्णायकहरुको प्रशंसा पाएका सुरेश दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । उनीमा निर्णायकहरुले कम्तिमा पनि उत्कृष्ट २० सम्म पुग्न सक्ने क्षमता देखेको बताएका छन् ।
१२) मदन मगर –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका बाह्रौँ प्रतियोगी हुन् मदन मगर । उदयपुर गाईघाट निवासी मदनले यसअघि नेपाल आईडलमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘खै जालमा पारेर गई’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘कसरी म भुलेँ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
१३) सन्दीप सुनुवार –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका तेह्रौँ प्रतियोगी हुन् सन्दीप सुनुवार । विभिन्न सांगितिक कार्यक्रममा समेत व्यस्त भईरहने सन्दिप सांगितिक क्षेत्रमा चम्कँदै छन् । उनले अडिसनमा ‘माया तिमले’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
१४) सरला बिसी –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका चौधौँ प्रतियोगी हुन् सरला बिसी । नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा सक्रियताका साथ लागिरहेकी सरलाका केही ओरिजिनल गीतहरु समेत सार्वजनिक भईसकेको छ । सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्ने गरेकी सरलाले विभिन्न संघर्ष गर्दै संगीत क्षेत्रमा पहिचान बनाउँदै छिन् । संगीतमा स्नातक गरेकी सरला गजल गायिकाका रुपमा पनि कार्यरत छिन् । उनले अडिसनमा ‘उदास मेरो जीवनकथा’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । पहिलो गीतपछि उनले ‘तिम्रो आँखामा आँशु हेरी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएकी हुन् ।
१५) कमल रसाईली –नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका पन्ध्रौँ प्रतियोगी हुन् कमल रसाईली । झापा निवासी कमलका झम्के माया जस्ता अन्य थुप्रै चर्चित गीतहरु समेत सार्वजनिक भईसकेका छन् । गायकका रुपमा चिनिँदै गरेका कमल विभिन्न सांगितिक कार्यक्रमहरुमा पनि व्यस्त छन् । उनले अडिसनमा ‘आँखामा निद छैन’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।